Sary sy Articles Submitted by Visitors | Outboard Boat Motor Repair
Sary sy Articles Submitted by Visitors
Ireo tetikasa etsy ambany dia avy amin'ny tranokala taloha. Raha te hilaza aminay momba ny tetikasanao ianao dia tsidiho ny Visitor Project Comment Page izay afaka mampakatra ny sary ary milaza amintsika momba ny tetikasa.
Ken Denman Nanoratra lahatsoratra tena tsara "Mitondra ny Outboard avy any Storage"amin'ny endrika Microsoft Word. Misaotra Ken, azoko antoka fa ho hitan'ny hafa fa mahasoa izy ity.
Izany no vita '56 Lightwin, modely 3018. Tsy tanteraka ny miray feo miaraka amin'ny kase vaovao ao amin'ny vondrona ambany. Koa satria nanana ny tanky maro dents sy tany am-boalohany tao loko tsara tarehy ratsy endrika, dia nendahany azy; ary nandoko fotsiny ny fiara sy ny cowlings. Nanapa-kevitra koa aho hamely decals vaovao izany fotsiny aho tanana hoso-doko ny fiara sy ny fanaraha-maso ampinga lovia. Zavatra tsy mihazakazaka be kicker kely manosika ny 8 'dinghy amin'ny tsara tarehy Clip tsara manodidina Lake Kewoee any avaratr'i South Carolina, JONO ny basse sy ny bluegill.
Izaho dia manana sambo '58 Johnson Seahorse 5.5hp (sary mifatotra) an'ny raiko. Tsaroako tsara ny niarahako taminy tany amin'ny fivarotana fanatanjahantena any Milwaukee hividy vaovao. Mety tsy avo noho ny maotera aho. Nitsambikina tao amin'ny lakaly / garazako izy ary tsy notazomina tato anatin'ny 25 taona lasa. Tsy zakako ny misaraka aminy, fa etsy an-danin'izany dia tsy nisy fantatro izay hanombohana ny famerenana azy io. Sendra nianjera tamin'ny tranokalanao aho namaritako ny tetikasanao manokana amin'ny antsipiriany be dia be. Tsy afaka manomboka milaza aminao aho fa mahasoa ahy io. Te-hisaotra fotsiny anao noho ny fotoana sy ny ezaka nifanaraka tamin'ny fampahafantarana izany. Enga anie ka hovelomiko indray ny ranomasin'ity ririnina ity.
Hi Tom. Tiavo ny toerana. Misaotra noho ny fanampiana. Ireto misy pics ny 1964 3HP Johnson. Ny renibeko nanome ahy ity, ary efa ela maotera fiberglass sambo (ampiasaina mba isan 'raibeko).
Ny maotera dia tsara endrika. dia efa overhauled sy miala ny roa taona lasa izay. My Friend Mike, ary izany dia amin'ny teny anglisy avokoa ny. 2 tena olana ihany izany. Ny roa voalohany dia samy coils nendasina. Koa, ilay visy ny impeller trano fonenana rehetra dia tsy nipetraka an-dalana, ka nahatonga ny impeller ny rivotra sy ny mitaiza kely overheat ny maotera. Raikitra ireo ankehitriny ny lehibe !! Aho dia tsy ho nahalala hoe aiza no hanombohana raha tsy noho ny toerana.
Misaotra, Aaron Publicover
Mametaka sary 2 an'ny motera naveriko manaraka ny pejin-tranonkalanao aho ..... nahafinaritra ahy niaraka tamin'ny Gheenoe taloha
ny Johnson nihazakazaka toy ny vaovao voalohany indrindra .... fotsiny isika Troll ny basse sy ny mara pearch.
Dia tapitra ny maotera overhauling mampiasa ny lahatsoratra sy ireo te aoka fantatrao fa ny fahombiazana. Marina ny an-toerana hoy ny maotera tsy very maina ny ezaka sy ny vola lany ary nanonona ahy ny $ 500 mba haka azy nihazakazaka. Mino aho fa manana ny $ 120 ao amin'ny impeller, carb indray fitaovana, hevitra, condenser, coils, plugs sy lube. Ary izao no zavatra tahiry. Tsy andriko ny haka azy ho any amin'ny farihy, ka jereo izay zavatra tianao atao. Nanomboka tamin'ny voalohany koa fitaomana! Izany maotera an'ny vadiko ny dadabeny ka tsy ho nihazakazaka ny 40 taona, ny rahalahin-drainy ilay izy, raha voatahiry ao amin'ny ambany rihana, dia tena nanana solika na izay solika indray mandeha, ny fiara. Misaotra ny tranonkala, dia tena nanampy ahy betsaka avy, ka nampaniriny tena mora ny hanatanteraka.